Iyo AirPods pakati pezvakanakisa makumi maviri neshanu zvigadzirwa zve25 maererano neTIME magazini | Ndinobva mac
Rimwezve gore, liye ane mukurumbira NGUVA magazini ine chigadzirwa cheApple pakati pezvakanakisa makumi maviri neshanu zvigadzirwa zva25. Vakasarudzika vashoma chete vane rombo rekuverengerwa mune ino runyorwa, iyo inokoshesa kwete chete iyo kwesimba kugona, kana zvisiri zvakare hunyanzvi hwavari uye iyo nyore mukuvakwa kwayo. Uye sei zvisiri, chigadzirwa chinogadzira mutsva maitiro pane izvo vagadziri vezvimwe zvigadzirwa vano tarisa kwaari kuti vavake yavo vhezheni.
Mutsamba yatinogona kuwana kubva kumagetsi emagetsi anodzika, maheti emabhasikoro anopeta kana mbatatisi iyo inoponesa hupenyu munyika dzichiri kusimukira.
Chimwe chezvinhu chinonyanya kushamisa nezve kubatanidzwa ichi kusavapo kwechinhu muzvitoro. Ndokunge, kusvika parizvino hakusi kutengeswa uye vashoma chete vane ropafadzo vakakwanisa kuvaedza muchiratidziro mushure mehurukuro yakakosha munaGunyana. Icho, saka, chinyorwa chisina kukwanisa kukosheswa neruzhinji, asi kunyangwe zvakadaro, chiri kugadzira tarisiro yakadai zvekuti magazini ine mukurumbira yakasarudza kuiisa mune yayo inozivikanwa rondedzero, iyo yanga ichiburitswa gore rega kubva 2012.
Uye ndeyekuti mahedhifoni aya haangopa chete isina waya mashandiro, ichivaita kuti vawedzere kushanda uye kuzvimirira Magazini iyi inokoshesa zvinhu zvitatu zvinochinja mashandisiro aunoita mahedhifoni.
Chekutanga pane zvese, ngatirangarirei kuti mahedhifoni ari mu bhokisi iro rinoita sechaja. Kana dzabviswa mubhokisi, dzakabatana neyedu iPhone, iPad kana iPod otomatiki kuchigadzirwa, pasina mushandisi kuita chero rimwe basa, nekuda kweChip inozivikanwa se "W1 chip".
Chechipiri, Chip yedu inoshamisa inomutsa Siri nekungobaya mahedhifoni aya kaviri.
Chechitatu, inosanganisira tekinoroji yakafanana neiya inoshandiswa muPhones, senge Kuchenesa Ruzha painotarisa kuti tinoda kutaura nemumwe munhu.
Zvichida Apple yakawanazve iyi "aura yechakavanzika" yatakange tajaira, sezvo tichiziva chigadzirwa zvakanyatso kukwana, asi kusvikira tave nacho mumaoko edu, inogona kugara iine zvakavanzika uye zvitsva chaizvo. Izvi zvinogadzira kunetsekana kwatinovimba kuti kuchagadziriswa tisati tasvika paKisimusi ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » AirPods pakati pezvakanakisa makumi maviri neshanu zvigadzirwa zvegore ra25 maererano neTIME magazini
Chinongedzo kune mareferenzi chingadai chisina kushata ...
Javier Porcar akadaro
Wataura chokwadi Alvaro, zvainge zvakarongwa asi zvakaitika kwandiri. Unotova nazvo. Ndatenda nekutaura.
Pindura Javier Porcar
Iwo akanakisa Mac zvishongedzo kwauri kuti uise mune yako tsamba kune vaMagi